(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇
Function (တွက်နည်း) မိတ်ဆက်
အစတုန်းကတော့ ညီမျှခြင်းနဲ့ ဖော်မြူလာတွေကို sheet’s cell တွေမှာ ထည့်တွက်ကြတယ်။ d1=a1+c1 ဒါမျိုးပေါ့။ ဖော်မြူလာကို ထည့်တာပါ။ နောက်တခုကတော့ function ဆိုတဲ့ ဖော်မြူလာထည့်ထားပြီးသား တွက်နည်းကို ခေါ်သုံးတာပါ။ တွက်နည်းဆိုတာက sum, average, count, maximum value, and minimum value ဆိုတဲ့ ပေါင်းလဒ်၊ ပျမ်းမျှခြင်း၊ အရေအတွက်၊ အများဆုံးကိန်း၊ အနည်းဆုံးကိန်း ဆိုတာတွေကို CELL တွေကို ဆလက်လုပ်ပြီး တွက်ခိုင်းတာပါ။ အဲသည် function ကို ခေါ်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ပေါင်းလဒ်အတွက် formula ကို d1=a1+c1+b1 တွေ လုပ်မနေဘဲ d1=sum(a1,b1,c1) လို့ တန်း ခေါ်သုံးတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
equals sign (=),afunction name (AVERAGE, SUM ဆိုတဲ့ ဖန်ရှင်ရဲ့ အမည်မှန်) ပြီးတော့ argument (ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်၊ ရည်ညွှန်းချက် ဆိုတာ) ပါရမယ်။ ဘယ် ဆဲလ်တွေကို ရည်ညွှန်းထားတာလဲ ဆိုတာမျိုး။
ရည်ညွှန်းချက်၊ သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ က ဆဲလ်လိပ်စာ တခု သို့မဟုတ် ဆဲလ်လိပ်စာ အစုအဝေးကို ကွင်းစ ကွင်းပိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားတာကို ပြောပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် - ပျမ်းမျြှုခင်းကို ရှာတဲ့ function =AVERAGE(B1:B9) ဆိုတာ cell range B1:B9 ထဲက ဂဏန်းတွေကို ရည်ညွှန်းပြီးတော့ သူတို့အားလုံးရဲ့ average - ပျမ်းမျှခြင်းကို ရှာခိုင်းတဲ့ တွက်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက် ညွှန်းဆိုချက် အများအပြားကိုလည်း ကွင်းထဲမှာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင်တော့ argument ထဲမှာ အုပ်စုတွေကို , ကော်မာနဲ့ ခြားထားလို့ ရပါတယ်။
ဥပမာ - =SUM(A1:A3, C1:C2, E1) ဆိုတာ ပေါင်းလဒ်ကို ရှာခိုင်းတာမှာ (a1:a3) တစု ပေါင်း၊ ပြီးတော့ (c1:c2) တစုပေါင်း၊ ပြီးတော့ e2 နဲ့ တွဲပြီး အားလုံးပေါင်းလဒ်ကို ထုတ်ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
SUM: ဆိုတာက argument () ထဲက cell တွေရဲ့ စုစုပေါင်းရလဒ်ကို ပေးပါတယ်။
AVERAGE: ဆိုတာက argument () ထဲက cell တွေရဲ့ ပျမ်းမျှကိန်းကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ သဘောကတော့ cell တွေကို အရင်ပေါင်းပြီးတော့ cell အရေအတွက်နဲ့စားပြီး ရလဒ် ထုတ်တာကို တွက်ပေးတာပေါ့။
COUNT: ဆိုတာက argument () ထဲက cell အရေအတွက်ကို ရှာပေးတာပါ။
MAX: ဆိုတာက cell တွေထဲက အကြီးဆုံး ကိန်းကို ရှာပေးတာ။ highest cell value ပေါ့။
MIN: ဆိုတာက အနိမ့်ဆုံးကိန်း lowest cell value ကို ရှာပေးတာပါ။
Function ခလုပ်သုံးပြီး တွက်နည်းများ ခေါ်သုံးခြင်း
ပုံမှာ ပါတဲ့အတိုင်း cell D3:D12 ကို ဆလက်လုပ်ပါ။
Functions button ကို မီးနူးကနေ ဆွဲချပါ။
SUM ကို ရွေးလိုက်ရင် - တခါတည်း function ကို ဆလက်လုပ်ထားတဲ့ ဆဲလ်တွေနဲ့ argument သွင်းပြီးသား ပေါ်လာပါတယ်။
Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ တခါတည်း တွက်ထားတဲ့ အဖြေ ပေါ်လာပါတယ်။ sum of D3:D12 is $765.29.
ဖန်ရှင်တွေကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရိုက်ထည့်ပြီး သုံးခြင်း
ဖန်ရှင်အမည်တွေကို သိနေပြီဆိုရင်တော့ ဖန်ရှင်ကို စာနဲ့ တန်းပြီး ရိုက်ထည့်လို့ ရပါတယ်။ menu pulldown ကနေ ခေါ်သုံးစရာ မလိုပါ။ AVERAGE function ကို ခေါ်ပြီးတော့ အောက်ဖော်ပြပါ သင်ခန်းစာက အရောင်းစာရင်းကနေ ရောင်းရငွေတွေထဲက တခုချင်းစီရဲ့ ပျမ်းမျှအရောင်းကို တွက်ကြည့်ရအောင်။
C10 ကို ဆလက်လုပ်ပါ။
equals sign (=) ကို ရိုက်ပြီးနောက် သိထားတဲ့ ဖန်ရှင်အမည် function name ကိုစရိုက်ကြည့်ပါ။ ဂူးဂဲရှိကနေ သူဆီမှာ ရှိတဲ့ Aနဲ့ စတဲ့ function တွေကို suggest လုပ်တာ တွေ့ရမယ်နော်။ suggested functions ထဲကနေ သည်လို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ =AVERAGE.
အဲသည် ရိုက်လိုက်တာနဲ့ function နောက်မှာ လိုက်ပါရမည့် ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ သတ်မှတ်ချက် ရည်ညွှန်းချက်တွေကို ဂူးဂဲကနေ ဆက်တောင်းပါတယ်။ argument တွေ ဘာတွေ လိုသလဲဆိုတာကို သူက suggest လုပ်ပေးတာပေါ့။
cell range ကို parentheses လို့ခေါ်တဲ့ ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပါ။ (C3:C9) ပေါ့။ လိုချင်တာက ရောင်းရတဲ့ ဈေးတွေထဲက ပျမ်းမျှအရောင်း ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကို သိချင်တာကိုး။
Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ အဖြေထွက်လာပါတယ်။
ဂူးဂဲ၏ ဖန်ရှင် တွက်နည်းများ စာရင်းကို ဂူးဂဲမှာ ရိုက်ပြီး ရှာကြည့်ပါ။
Excel နဲ့ Google Function တွေက ဆင်တူတွေ များပါတယ်။ Excel သုံးသူတွေအတွက် မခက်ပါ။
ဖန်ရှင်စာရင်းကို menu pulldown ကနေ ခေါ်သုံးခြင်း
Functions button ကို ဆွဲချပါ။ More functions... ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Google sheets function list ကို ၀င်းဒိုးတခုနဲ့ ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
နောက် စမ်းသုံးချင်စရာ ဖန်ရှင်တခုကတော့ VLOOKUP ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သင်တန်းဆရာက ပြသပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ VLookup ဆိုတာက မိမိ sheet ထဲကနေ argument တွေ အများကြီး ထုတ်ပြီး ဒေတာကို ရှာတာ စီစဉ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - =VLOOKUP("Photo frame", A2:B16, 2, FALSE) ဆိုတာကို ဘယ်လို သုံးသလဲဆိုတာ စမ်းခိုင်းပါ။
cell C10 မှာ ပစ္စည်း အရေအတွက် ပျမ်းမျှ ဘယ်လောက် ရောင်းရသလဲ ဆိုတာ ရှာပါ။ finds the average number of units sold by all of the troops.
cell C11 မှာ ရောင်းရတဲ့ ပစ္စည်း အရေအတွက် ပေါင်းလဒ်ကို ရှာပါ။ find the total amount of units sold by all of the troops.
cell C12, မှာ ဘယ်အဖွဲ့က အများ ဆုံး ပစ္စည်းအရေအတွက် ရောင်းရသလဲ ဆိုတာ ရှာပါ။
Maung Yit Technology